एक सातामा कुन-कुन निर्जीवन बीमा कम्पनीको शेयरमूल्य कतिले बढ्यो ?
चैत २१, काठमाडौं । बजार बढेसँगै एक हप्तामा अधिकांश निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको शेयर मूल्यमा आर्कषक वृद्धि भएको छ । सूचीकृत १८ ओटा कम्पनीमध्ये तीन ओटा कम्पनीको शेयरमूल्य घटेको छ भने बाँकी सबै कम्पनीहरुको शेयरमूल्यमा वृद्धि भएको हो । सबैभन्दा बढी अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयरमूल्य एक हप्तामा ३२५ रुपैयाँले वृद्धि भएको छ ।
गत हप्ता चैत १२ गते शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ७०६ रहेकोमा कम्पनीको शेयरमूय वृद्धि भएर यस हप्ता चैत १९ गते रू. १ हजार ०३१ पुगेको छ । कम्पनीले ५० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने प्रस्ताव गरेसँगै शेयर मूल्यमा वृद्धि भएको हो । हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने भएपछि लगानीकर्ताको आर्कषण बढेको हो । त्यसैगरी दोस्रोमा हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयरमूल्य सातामा १७० रुपैयाँले वृद्धि भएको हो ।
त्यस्तै, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीको ६ रुपैयाँ, नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको २९ रुपैयाँ र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको १५० रुपैयाँले कमी आएको हो । सद्धार्थ इन्स्योरेन्सको हकमा कम्पनीले लाभांश प्रस्ताव गरेसँगै विक्रेताभन्दा खरीदकर्ता बढी भएर शेयरमूल्य आर्कषक तरीकाले वृद्धि भएको थियो ।
पुनः अल्पकालिन लगानीकर्ताले प्रोफिट बुक गर्न थालेसँगै घट्न पुगेको हो । कम्पनीले गत आवको मुनाफाबाट शेयरधनीलाई १२ प्रतिशत बोनस शेयर र ३ दशमलव ७९ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
त्यसैगरी, नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयरमूल्य बोनस शेयर समायोजनको पछि घटेको हो । नेप्सेले ८ प्रतिशत बोनस शेयरको समायोजन पछि मूल्य रू. ७८१ तोकेको थियो । कम्पनीले साधारण सभा र लाभांश वितरण प्रयोजनको लागि चैत १७ गतेदेखि २७ गतेसम्म बुक क्लोज गरेको छ । कम्पनीले ८ प्रतिशत बोनस शेयर र २ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारितका लागि आगामी चैत २७ गते साधारण सभा बोलाएको छ ।
अझै ९ ओटा कम्पनीले गत आवको मुनाफाबाट शेयरधनीलाई लाभांश प्रस्ताव गर्न बाँकी रहको छ । आव २०७६/७७ को नाफाबाट नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी, सगरमाथा इन्स्योरेन्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स, लुम्बिनी इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, युनाइटेड इन्स्योरेन्स, अजोड इन्स्यारेन्स, जनरल इन्स्यारेन्स र सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले लाभांश वितरण गर्न बाँकी रहेको हो । यसले गर्दा अझै निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुको शेयरमूल्य बढ्ने देखिन्छ ।